जनयुद्ध दिवसः जनयुद्ध सुरुदेखि ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी खाली गर्ने बेलासम्मका मुख्य घटनाहरु — onlinedabali.com
काठमाडौँ । आज फागुन १ गते । २०५२ साल आजैको दिन तत्कालिन नेकपा –माओवादी)ले जनयुद्ध घोषणा गरेको थियो । आज २३ वर्ष पूरा भएर २४ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । दश वर्षसम्म चलेको जनयुद्ध छापामार हुँदै प्रत्याकर्मणसम्म पुगेको थियो । हजारौं वीरहरुले रगत बगाए । जनयुद्धकै बलमा देश गणतन्त्रमा फड्को मार्यो ।
जनयुद्धले सुरु गर्दा तत्कालिन नेतृत्गले जुन उद्देश्यमा प्रतिवद्धता जनाइएको थियो, त्यसबाट पछि फर्के भन्दै माओवादीको एउटा हिस्साले क्रान्तिलाई जारी राखेको बताउँदै आएका छन् । मूल नेतृत्व भने एमालेसँग पार्टी एकता गरेर संसदीय व्यवस्थाबाटै बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने बताइरहेको छ ।
यसैबीच जनयुद्ध लडेको पंक्तिले नै फरकफरक शैलीमा जनयुद्ध दिबस मनाएका छन् । विप्लव र वैद्यले नेतृत्व गरेका नेकपा र क्रान्तिकारी माओवादीले संघर्षलाई जारी रहेको बताउँदै जनयुद्ध मनाएका छन् भने प्रचण्डले पूर्वएमालेको पार्टी कार्यालयमा ।
जनयुद्धले राजनीतिसँगै सामाजिक रुपान्तरणमा उथुलपुथुल ल्याएको थियो । जनयुद्ध सुरुदेखि ज्ञानेन्द्र शाह नारायणहिटीबाट बाहिरिँदासम्मका केही मुख्य घटनाहरुः
फागुन ६ः नेकपा माओवादीका महामन्त्री प्रचण्डद्वारा एक प्रेस वक्तव्यमार्फत् ती कार्बाहीको जिम्मेवारी स्वीकार ।
असारः माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकद्वारा ‘योजनाबद्ध ढङ्गले छापामार युद्धको विकास गरौँ’ भन्ने मूल नारासहित जनयुद्धको विकासको दोस्रो योजना सुरु ।
वैशाखः तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले ‘सबैलाई मार, सबै चीज जलाऊ र सबै चीज लूट’ को किलो शेरा टू नामक अपरेसन सञ्चालन । प्रहरीद्वारा यो अपरेसनको क्रममा पाँचसय जनताको हत्या ।
भदौः नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समितिको चौथो विस्तारित बैठक सम्पन्न । ‘आधार इलाका निर्माणको दिशामा अघि बढौँ’ भने मूल नारा तय ।
जेठ ६ः नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्र शर्मा, जनादेशका प्रबन्ध सम्पादक मिलन नेपाली, पूर्वका छापामार प्लाटुन कमान्डर नवीन गौतम र कमला शर्मालगायतलाई गिरफ्तार गरी बेपत्ता । त्यसबेलादेखि तत्कालिन सरकारले नागरिक बेपत्ता पार्न सुरु गर्यो । आजसम्म पनि उनीहरुसहित करिब पाँच हजार बढीको अवस्था सार्वजनिक गरिएको छैन ।
भदौ २३ः नेकपा माओवादीका वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य सुरेश वाग्ले ‘बासु’ को गोरखामा गिरफ्तारपछि हत्या ।
असार २८ः रोल्पाको होलेरी चौकीमाथि सबेरै आक्रमण गरी ६९ प्रहरी कब्जा । शाहीसेनाको परिचालन प्रयास ।
असार ३०ः रामेछापको धोवीडाँडा प्रहरी चौकी कब्जा ।
मङ्सिर १०ः पूर्वमा जनसेनाद्वारा सोलु सदरमुकाम सल्लेरी कब्जा, सिडिओसहित १३७ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु ।
मङ्सिर ११ः देउवा सरकारद्वारा सङ्कटकालको घोषणा । शाहीसेनाको औपचारिक परिचालन । जनादेश साप्ताहिक र जनदिशा दैनिकका कार्यालयमा रेड गरी ११ जना पत्रकार गिरफ्तार ।
मङ्सिर १२ः तत्कालिन शाही सेनाद्वारा भिषण अपरेसन सुरु । जताततै गिरफ्तारी, धरपकड, हत्या र राज्य आतङ्क ।
फागुन ४ः जनसेनाद्वारा अछाम सदरमुकाम र साँफेबगर एयरपोर्ट कब्जा । भिडन्तमा ५५ शाहीसेना र १५० प्रहरीको मृत्यु ।
वैशाख १९ः रोल्पाको लिस्ने लेकमा शाहीसेनासँग जनसेनाको दिउँसै भिडन्त । जनसेनाद्वारा बलियो अमेरिकी फोर्टि्िफकेसनसहित बनाइएको गाम संयुक्त शाही सुरक्षा बेसक्याम्प कब्जा ।
माघ ५ः खड्गबहादुर बिक ‘प्रकाण्ड’को अध्यक्षतामा भेरी–कर्णाली स्वायत्त गणतन्त्र, जनसरकारको घोषणा ।
माघ १६ः तमुवान स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकार घोषणा, प्रमुखमा देव गुरुङ ।
माघ १९ः किरात स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकारको घोषणा, गोपाल खम्बु प्रमुख ।
माघ १०ः मधेस स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकारको घोषणा, प्रमुखमा मातृका यादव ।
वैशाख ३१ः माओवादी केस तथा मङ्गलसेन प्रथम ब्रिगेडका कमान्डर नेपबहादुर केसी ‘परिवर्तन’को आन्तरिक दुर्घटनामा शहादत ।
जेठ ६ः डोटीको घन्टेश्वरमा जनसेना–शाही सेना भिडन्त । डेढ दर्जन शाहीसेनाको मृत्यु ।
असार ३ः अखिल (क्रान्तिकारी) द्वारा शिक्षण हडतालसहित विविध सशक्त सङ्घर्ष गरेर सङ्गठनमाथिको आतङ्ककारीको आरोप फिर्ता गराउन सफल ।
साउन-भदौः माओवादीको केन्द्रीय समितिद्वारा ‘प्रत्याक्रमणको पहिलो योजना सफल पारौँ ! वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध व्यापक तयारी गरौँ ! भन्ने मूल नारासहितको प्रत्याक्रमणको योजना पारित ।
मङ्सिर १ः जनसेनाद्वारा धादिङको कृष्णभीरमा एम्बुस । शाहीसेनाको एक ट्रक र हतियार कब्जा । उक्त भिडन्तको भिडियो नेपाल वान टेलिभिजनले प्रशारण गरेपछि ठूलो खैलाबैला । सोही दिन धनुषाको महेन्द्रनगर इप्रका कब्जा ।
मङ्सिर २ः बाँकेको खैरीखोलामा धरापमा परी ८ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु । सबै हतियार कब्जा ।
मङ्सिर ५ः कैलालीको पण्डोनमा जनसेनाद्वारा शाही सेनाको रेन्जर बटालियनमाथि हमला, १९ को मृत्यु । ६ थान एमः १६ सहितका हतियार कब्जा ।
पुस ७ः कर्णाली चिसापानीमा शाहीसेनामाथि भीषण हमला गरी १५ शाही सेनाको मृत्यु ।
पुस १७ः धनकुटाको सेउती खोलामा जनसेनाको एम्बुस, २० सुरक्षाकर्मीको मृत्यु ।
माघ २०–२२ः शाही ‘कू’ विरुद्ध तीन दिने नेपाल बन्द ।
चैत २०–३०ः माओवादीद्वारा एघार दिने देशव्यापी आमहड्ताल ।
जेठ २७ः काभ्रेको नार्केमा शाही सेनामाथि जनसेनाको आक्रमण । त्यसको पर्सिपल्ट घर्तीछापमा अर्को गस्तीमाथि आक्रमण । दुबै आक्रमणमा २२ शाही सुरक्षाकर्मीको मृत्यु ।
असार ८ः जनसेनाद्वारा भोजपुरको पान्धारेमा शाहीसेनामाथि आक्रमण । ८ शाही सेनाको मृत्यु ।
असार ११ः जनसेनाद्वारा अर्घाखाँचीको खनदहमा शाहीसेनामाथि आक्रमण । लेफ्टिनेन्टसहित १९ शाही सेनाको मृत्यु ।
मङ्सिर १४ः शाहीसेनाद्वारा हेलिकोप्टरबाट हानेको गोली लागेर डिभिजन कमान्डर किमबहादुर थापा ‘सुनिल’ को सहादत ।
चैत २४ः सात दल(माओवादी संयुक्त शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु ।
जेठ ४ः पुनस्र्था्िपत प्रतिनिधिसभाको बैठकद्वारा संविधानसभाको निर्वाचन गराउने घोषणा ।
मङ्सिर ५ः सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच १० बुँदे ऐतिहासिक विस्तृत सम्झौता, एघार बर्से माओवादी जनयुद्धको समाप्तिको घोषणा । प्रचण्डको यो निर्णय पार्टीगत वा संस्थागत नभएको भनी पार्टी्िभत्रै आलोचना ।
पुस ११ः प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवालले पटक पटक सैनिक ‘कु’, डेमोक्रेटिक ‘कु’ आदिको धम्की दिएपछि माओवादी अध्यक्षद्वारा नेपाल लेखक सङ्घद्वारा आयोजित साहित्यिक विचार गोष्ठीमा बोल्दै सैनिक ‘कु’ गरिए जनमुक्ति सेनाले विद्रोह गरी एके( ४७ हतियार बोकेर लड्ने चेतावनी ।